UNgangezwe Lakhe weseka iBhayibheli lesiZulu elisanda kuhunyushwa | Scrolla Izindaba
IBhayibheli elisha lesiZulu akuzwakali njengomqondo omuhle lokho.
Kodwa-ke kubonakala sengathi amabhayibheli “asendulo” indlela abehunyushwe ngawo, ayisabasebenzeli kahle abe-Bible Society of South Africa (BSSA).
NgeSonto, inhloko ye-BSSA esifundeni saseMpumalanga uClive van Rooyen, iMeya yesiFunda saseZululand uThulasizwe Buthelezi, umsunguli weqembu le-IFP uMntwana uMangosuthu Buthelezi kanye neMeya kaMasipala wasoLundi uWilson Ntshangase bethule iBhayibheli elisha lesiZulu oLundi, KwaZulu-Natali (KZN).
Noma kube khona okunye ukuhumushwa ngaphambilini kwebhayibheli, kodwa ukuhumushwa kwalo nyaka wezi-2020 kungokokuqala emlandweni we-BSSA ukuthi kwenziwe ngokuphelele yizazi zemfundiso yenkolo kanye nochwepheshe bolimi abakhuluma isiZulu “njengolimi lwebele”.
Usihlalo weKomidi Lokubuyekeza uManqoba Ndlovu uthe, okulandelayo yikhona okube yinkinga:
Ukuhunyushwa kwemibhalo yasendulo, izilinganiso, kanye nokuhumusha ususela kumaHebheru uya esiZulwini
Amagama ezinyanga zonyaka ebezibhalwe ngesiHebheru, nazo zibe yinselelo
Izinkomba zasendulo zesikhathi sosuku
Amagama aseBhayibhelini anezincazelo – ngakho-ke ukuhumusha ngencazelo esiZulwini kuba yinkinga
Amagama nemisho esetshenzisiwe
Ukulinganisa ulimi – “sithini isiZulu sethu esijwayelekile?”
“Ngokuthuthuka kolimi lwesiZulu eminyakeni edlule, le ncwadi ebalulekile ibidinga ukuhunyushwa ukuze ihambisane kakhulu nolimi lwesiZulu olukhulunywa kulesi sikhathi esiphila kuso sama-21,” kusho iMeya yasoLundi.